Ukwelashwa kweBruxism: Ungakuyeka kanjani ukugaya amazinyo - Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Inkampani, Izindaba Izidakamizwa Vs. Umngani Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izindaba Umphakathi, Inkampani Ukuphuma Umphakathi Izindaba Inkampani, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Cindezela Umphakathi, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo
Main >> Imfundo Yezempilo >> Kungani ngigaya amazinyo?
Kungani ngigaya amazinyo?
Ngabe uvuka unemisipha ebuhlungu ebusweni noma ubuhlungu emhlathini? Ingabe uvame ukuphathwa yikhanda ekuseni? Ungase ugaye amazinyo akho ngenkathi ulele. Ngokwelashwa eyaziwa ngokuthi i-bruxism, ukunyakaza okuphindaphindiwe, okungazi lutho nokugaya. Akuzikhetheli, futhi imvamisa awazi ukuthi uyakwenza, ikakhulukazi uma ugedla amazinyo ngenkathi ulele. Kunzima ukuyeka ngamabomu ngaphandle kwamasu okuthi ungakuyeka kanjani ukugaya amazinyo.
ngingayiphuza yini imithi yesicanucanu ngenkathi ngikhulelwe
IBruxism yigama lezokwelapha lokugaya amazinyo. Ukugaya amazinyo wukuzihlikihla ndawonye ndawonye, ​​noma ukuququda amazinyo, kwezindawo ezilumayo zamazinyo akho. Ungafaka kufinyelela kumakhilogremu angama-250 engcindezi emazinyweni akho, ngokusho kwe- Incwadi ye-MSD . Lokho kungamandla amakhulu.
Yini ebangela ukugaya amazinyo?
Ukugaya amazinyo kuvamile. Kuze kube yingxenye eyodwa kwezintathu yabantu abadala abakhombisa indlela yokuziphatha kwe-bruxism ngesikhathi sasemini; ngaphezu kwe-1 kwabayishumi bane-bruxism yokulala (noma i-bruxism yasebusuku), ngokusho kwe- Isikhungo Sezokwelapha seCedars-Sinai . Noma ikuphi kusuka ku-20% kuya ku-30% wezingane zigaya amazinyo, imvamisa lapho zilele, ngokusho okhanddec.org .
Ayikho imbangela eyodwa yokugaya amazinyo. Kodwa-ke, kunezinto eziningi ezinikele:
Ukucindezeleka: Ngezikhathi zokukhathazeka okukhulu, abantu abaningi bagaya amazinyo abo. Kungaba umkhuba futhi kuqhubeke ngisho nangezikhathi zokuthula.
Izakhi zofuzo: I-Bruxism ingaba ifa. Njengoba abaningi uhhafu wabantu abagaya amazinyo abo banelungu lomndeni eliseduze nalo eline-bruxism.
Izimo ezithile zezokwelapha: I-Bruxism ivame kakhulu ezinganeni ezitholakala zinenkinga yokungasebenzi kahle, njenge-ADHD, noma izimo ezithile zempilo, ezinjenge-cerebral palsy. Kuvame kakhulu kubantu abadala abane ukudana , ukukhathazeka , i-acid reflux noma isifo se-reflux se-gastroesophageal (GERD) , nezinkinga ezithile zokudla.
Izinkinga zokulala: Ukugaya amazinyo kuhlotshaniswa nokuthimula, ukuvimbela ukuphefumula kokulala, kanye nokushintsha kaningi kokulala. Isibonelo, abasebenzi abasebenza phakathi kokulala emini nobusuku bangase babe namathuba okugaya amazinyo.
Izici Zokuphila: Ukusetshenziswa kukagwayi, ukuphuza utshwala, nokudla i-caffeine konke kuxhunyaniswe ne-bruxism. Noma kunjalo, kudingeka olunye ucwaningo ukuthola ukuthi lezi zinto ezinobungozi zingaba kanjani nomthelela kulesi simo.
Ukuntuleka kwamavithamini: Kukhona ukuqagela ukuthi ukuswelakala kwamavithamini athile kungafaka isandla ku-bruxism. Uvithamini D ukushiyeka nokumuncwa kabi kwe- i-calcium zifundwa njengezinto ezingaba khona ekugayeni amazinyo, kusho UCristi Freinberg-Truffles , DDS, udokotela wamazinyo eHudson Valley Dental Care, PC. Kunezifundo eziningi eziqhubekayo, kepha abukho ubufakazi obuqand 'ikhanda obuvelile bokuthi i-American Dental Association isisebenzisile.
Imithi ebanga i-bruxism
I-Bruxism ingaba ngumthelela ohlangothini oluthile wemithi ethile, ngokusho kwe-a ucwaningo olushicilelwe ku-2019 . Amacala okungenzeka afaka phakathi ama-antipsychotic kanye nama-anti-depressants asetshenziswa kakhulu, njenge:
I-Effexor ( venlafaxine )
I-Paxil ( paroxetine )
I-Prozac ( i-fluoxetine )
I-Zoloft ( umabhebhana )
Isikhathi esiphakathi sokugaya amazinyo amasonto amathathu kuya kwamane ngemuva kokuqala umuthi, noma abanye abantu beqala ngemuva kwemithamo embalwa nje. Kuthatha cishe amasonto amathathu kuya kwamane ngemuva kokumisa umuthi wokuncipha kwamazinyo ukuze ume.
I-bruxism itholakala kanjani?
I-Bruxism ivame kakhulu, kepha abantu bangaba ne-asymptomatic futhi bangazi ukuthi banakho lokhu kuziphatha, kusho UMary Charles Haigler , I-DMD, ingcweti yezinhlungu ezisezingeni eliphansi eCarolinas Centres for Oral, Facial, Cosmetic & Dental Implant Surgery. Lokhu kuvame ukuba yiqiniso lapho ukugaya amazinyo kwenzeka ebusuku. Kwesinye isikhathi ilungu lomndeni liyiletha ngenxa yomsindo — ukuchofoza, nokuqhuma — okuphazamisa ukulala kwabo. Abanye abantu bangahle babone imiphumela emibi [yokugaya], kuchaza uHaigler. Eminye imiphumela emibi engaba khona ebonwe ngochwepheshe bezempilo yomlomo ngamazinyo aqhekekile, izinhlungu zekhanda ezinhlobonhlobo, ubuhlungu obukhulu ebusweni noma emhlathini, kanye nezinkinga ze-temporomandibular joint (TMJ).
Izimpawu zokuqala ze-bruxism zifaka:
Ubuhlungu ebusweni noma emhlathini
Ukuphathwa yikhanda, ikakhulukazi ekuseni
Ngaphandle kokunakwa okufanele, i-bruxism ingadala ukulimala kwesikhathi eside , njenge:
Izinkinga zamazinyo, ezinjengamazinyo aqotshiwe, aqhekekile, noma axegayo, imiqhele, noma okufakelwayo
Amazinyo azwelayo abangelwa ukugqoka phansi koqweqwe lwawo lwamazinyo
Imisipha yobuso nemihlathi eminyene
Ukulimala ngaphakathi kwesihlathi
Izindawo eziyizicaba endaweni yokuluma yamazinyo
Izikhathi eziningi, i-bruxism itholakala ngokubonwa ngudokotela wamazinyo noma amalungu omndeni; kodwa-ke, ukuxilongwa okucacile kuhilela ukuhlala ubusuku bonke emtholampilo wokulala — obizwa nge-polysomnography. Lolu cwaningo lokulala luvame ukubiza futhi ludla isikhathi, futhi abantu bangakhetha indlela yokubuka engahlaseli kangako, lapho kwenziwa khona ukuxilongwa kokugabadela.
Ungamisa kanjani ukugaya amazinyo
Emacaleni angaphezu kuka-90%, ukwelashwa nge-bruxism kulula kakhulu futhi kuyasebenza, kusho UDaniel Wolter , I-DMD, udokotela wamazinyo wokubuyisela futhi ojwayelekile e-Arizona. Ezimweni eziningi, lokhu futhi kusiza ngobuhlungu obuhlangene noma besisipha kanye nekhanda.
Kunezindlela eziningi zokwelashwa:
1. Amasu okuphumula
Abanye abantu bangehlisa ukugaya amazinyo abo ngokwenza amasu okuphumula; kodwa-ke, lokhu kuphumelela kakhulu kubantu abane-bruxism emnene emini. Ezinganeni ezincane, i-bruxism ivame ukuphela, futhi ukwelashwa akudingeki. Kuze kube yilapho ixazululeka, ukudala isimiso sokuthula sokulala sokukhuthaza ukuphumula kungasiza, ngokusho kwe-familydoctor.org. Lokhu kubandakanya ukukhawulela ithelevishini ne-elekthronikhi ihora noma amabili ngaphambi kokulala, ukudlala umculo opholisayo, ukugeza okufudumele, nokuchitha isikhathi ufunda.
ukukhokhela inzalo esikhwameni
2. Izinguquko zokuziphatha
Izindlela zokufunda ezinjengokuthi ungaluphumuza kanjani ulimi, amazinyo, nezindebe kahle — noma ulubuyisele phezulu — zinganciphisa ukuphatheka kabi emihlathini. Futhi, ukufunda ukukhomba izimbangela nokusebenzisa ukunciphisa ukucindezeleka nokuzivocavoca ebusweni kunganciphisa i-bruxism.
3. Abaqaphi bomlomo
Ebizwa nangokuthi imishini noma iziqobosho, izivikeli zomlomo zisetshenziselwa ukuvimbela amazinyo akho ekuhlikihleni ndawonye. Zenziwe ngezinto ezithambile futhi zilingana ngaphezu kwamazinyo aphezulu noma amazinyo aphansi. Izindwangu zigqokwa ebusuku ukukhulula ingcindezi yamazinyo okuhlangana ndawonye, ​​ngokusho kwe- Inhlangano Yamazinyo yaseMelika . Onogada basebusuku ngokwezifiso bayabiza kakhulu kunonogada bomlomo abangathengiswa ezitolo, kodwa bangu- kusebenza ngokwengeziwe inketho yokwelashwa. Kungasiza ukugqoka unogada wasemini ukuze uqaphele lapho ugaya noma ugoqa amazinyo akho, kusho uDkt Freinberg-Trufas. Ukuqwashisa ngokugaya kungakusiza uqale ukugqashula kulo mkhuba.
4.Idivayisi yokuthuthuka ye-mandibular (MAD)
I-MAD isebenza ngokuzinzisa umlomo nomhlathi ukuvimbela ukuhlangana nokugaya. Ibekwa ngaphakathi emlonyeni ebusuku futhi ibambe umhlathi ophansi phambili, futhi ingasetshenziselwa ukunciphisa ukuhosha okungapheli.
Le nqubo isebenzisa ithuluzi elenziwa ngogesi ukukala ukusebenza kwemisipha nezimpawu lapho kunomsebenzi omningi kakhulu, ngakho-ke ungathatha izinyathelo zokuyimisa, efaneleke kangcono i-bruxism yasemini.
ungathatha kangaki i-tylenol ne-ibuprofen
Imibhalo efana ne- ukuphumula kwemisipha , inganciphisa ukungezwani emisipheni yomhlathi. Lokhu kungenzeka kungayeki ukuvimba noma ukugaya kepha kunganciphisa imiphumela ye-bruxism. Ngeshwa, imithamo edingekayo ukufeza ukukhululeka imvamisa iphakeme kakhulu ukwenza umsebenzi ojwayelekile, ngakho-ke kunzima ukuyisebenzisa ngokuyiqiniso ngaphandle kwezimo ezinzima, kusho uWolter. Kubalulekile futhi ukubheka imishanguzo yamanje ukuthola ukuthi ngabe i-bruxism ingabangelwa noma yenyuswe yiyo, futhi, uma kunjalo, khuluma ngokushintshela kumuthi ohlukile.
7. Imijovo yeBotox
Imijovo yeBotox ikhubaza imisipha yomhlathi esetshenziswe ngesikhathi kugaywa amazinyo. I-FDA ayivumanga I-Botox okokugedla kwamazinyo. Ngoba ukwelashwa okungekho kwelebula, umshwalense wakho ungahle ungakufihli. Noma kunjalo, isifundo esiqediwe ngo-2018 ukuthole kuwusizo ekwehliseni i-bruxism yasebusuku.
Ukwakha kabusha noma ukwakha kabusha indawo elumayo kungathuthukisa ukusebenza uma ukugaya nokuqinisa kunokubangela ukuluma okungavamile. Izinqubo zingabandakanya ukufaka amabala aphezulu noma ukusebenzisa okufakwayo noma imiqhele ukukala amazinyo.
Sebenza nodokotela wamazinyo wakho noma umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo ukuze akutholele ukwelashwa okungcono kakhulu.
Ungakwazi yini ukubamba amakhaza ehlobo?
ungawunqoba kanjani umkhuhlane ngokushesha
uyini umehluko phakathi kwe-phenylephrine ne-pseudoephedrine
ukuthi yikuphi ukushisa okungathathwa njengomkhuhlane
Icala elincane le-covid lihlala isikhathi esingakanani
umehluko phakathi o o negative no o oqondile